Nosoratan’i Jaona 11:1-57
Maty i Lazarosy (1-16)
Nampionona an’i Marta sy Maria i Jesosy (17-37)
Nanangana an’i Lazarosy i Jesosy (38-44)
Tetika hamonoana an’i Jesosy (45-57)
11 Narary ny lehilahy iray antsoina hoe Lazarosy. Tao Betania izy no nipetraka, tao amin’ilay tanàna nisy an’i Maria sy Marta anabaviny.+ 2 Io Maria io ilay nandraraka menaka manitra tamin’ny Tompo sy nanamaina ny tongony tamin’ny volony.+ Ary anadahiny i Lazarosy, ilay narary. 3 Nandefa hafatra tany amin’i Jesosy àry ireo anabavin’i Lazarosy ireo hoe: “Tompo ô, marary ilay namanao tsy foinao.” 4 Hoy anefa i Jesosy rehefa naheno an’izany: “Tsy ny hahafaty azy no anton’io aretina io, fa ny hanomezam-boninahitra an’Andriamanitra,+ mba hahazo voninahitra koa ny Zanak’Andriamanitra.” 5 Tian’i Jesosy i Marta sy ny rahavaviny ary Lazarosy. 6 Mbola nijanona roa andro tany amin’izay nisy azy ihany anefa izy rehefa naheno hoe narary i Lazarosy. 7 Taorian’izay, dia hoy izy tamin’ny mpianany: “Andao indray ho any Jodia.” 8 Hoy anefa izy ireo: “Raby ô,+ vao haingana ange ny Jodianina no nitady hitora-bato anao e!+ Dia hankany indray ve ianao?” 9 Dia hoy i Jesosy: “Angaha moa tsy adiny 12 no mazava ny andro?+ Raha mandeha amin’ny antoandro ny olona, dia tsy ho tafintohina mihitsy, satria hitany ny fahazavan’izao tontolo izao. 10 Fa raha mandeha amin’ny alina kosa izy, dia ho tafintohina, satria tsy ao anatiny ny fahazavana.” 11 Hoy izy rehefa avy niteny an’izany: “Matory i Lazarosy namantsika,+ fa handeha ho any aho hamoha azy.” 12 Dia hoy ny mpianany: “Tompo ô, raha matory izy dia ho sitrana.” 13 Te hilaza anefa i Jesosy hoe maty i Lazarosy, nefa noheverin’izy ireo fa maka aina izy dia matory. 14 Notsorin’i Jesosy avy eo hoe: “Maty i Lazarosy.+ 15 Soa ihany aho fa tsy tany, fa mahasoa anareo izany, amin’izay ianareo mino. Fa andao isika ho any aminy.” 16 Niteny tamin’ny mpianatra hafa àry i Tomasy, ilay atao hoe Ikambana, hoe: “Andao koa isika handeha, mba hiara-maty aminy.”+ 17 Rehefa tonga i Jesosy, dia efa efatra andro i Lazarosy no tao am-pasana. 18 Tany akaikin’i Jerosalema i Betania, ary telo kilaometatra* teo ho eo ny elanelan’ireo. 19 Ary be dia be ny Jiosy efa tonga nampionona an’i Marta sy Maria, noho izy ireo namoy ny anadahiny. 20 Rehefa henon’i Marta hoe tamy any i Jesosy, dia lasa nitsena azy izy. I Maria+ kosa mbola nipetraka tao an-trano ihany. 21 Dia hoy i Marta tamin’i Jesosy: “Tompo ô, raha teto ianao dia tsy maty ny anadahiko. 22 Na izao dia izao aza anefa, dia fantatro fa homen’Andriamanitra anao daholo izay angatahinao.” 23 Hoy i Jesosy: “Ao fa hitsangana ny anadahinao.” 24 Dia hoy i Marta: “Fantatro fa hitsangana izy rehefa atsangana ny maty+ amin’ny andro farany.” 25 Hoy i Jesosy: “Izaho no fananganana ny maty sy fiainana.+ Izay maneho finoana ahy, na maty aza, dia ho velona indray. 26 Ary izay rehetra velona ka maneho finoana ahy dia tsy ho faty mihitsy.+ Mino an’izany ve ianao?” 27 Hoy izy: “Eny, Tompo ô! Mino aho fa ianao no Kristy, ilay Zanak’Andriamanitra, ilay ho tonga eo amin’izao tontolo izao.” 28 Dia lasa i Marta rehefa avy nilaza an’izany, ka niantso an’i Maria rahavaviny, ary niteny taminy mitokana hoe: “Ao ny Mpampianatra,+ mitady anao.” 29 Vao naheno an’izany i Maria, dia nitsangana haingana ka lasa nankany amin’i Jesosy. 30 Mbola tsy tonga tao an-tanàna anefa i Jesosy, fa mbola teo amin’ilay nitsenan’i Marta azy. 31 Rehefa nahita an’i Maria nitsangana sy lasa nandeha àry ireo Jiosy nampionona azy tao an-tranony, dia nanaraka azy koa. Nihevitra mantsy izy ireo fa handeha hitomany tany am-pasana+ izy. 32 Rehefa tonga teo amin’i Jesosy i Maria, dia niankohoka teo an-tongony, ka niteny hoe: “Tompo ô, raha teto ianao dia tsy maty ny anadahiko.” 33 Rehefa nahita an’i Maria sy ireo Jiosy niaraka taminy nigogogogo nitomany i Jesosy, dia nisento lalina sady nalahelo be. 34 Ary hoy izy: “Aiza izy no napetrakareo?” Hoy ireo: “Tompo ô, andao jereo!” 35 Dia nirotsaka ny ranomason’i Jesosy.+ 36 Hoy àry ny Jiosy: “Tena tiany marina izy izany.” 37 Hoy anefa ny sasany: “Tsy vitan’io ve ny nisakana an’iny lehilahy iray iny tsy ho faty, nefa izy aza nahavita nanasitrana* ny mason’ny jamba?”+ 38 Nisento lalina indray i Jesosy, dia nankeo amin’ny fasana. Lava-bato notampenana vato ilay izy. 39 Ary hoy i Jesosy: “Esory io vato io.” Hoy anefa i Marta, anabavin’ny maty: “Tompo ô, tsy maintsy maimbo izy izao, satria efa efatra andro izay.” 40 Hoy i Jesosy: “Angaha moa izaho tsy efa niteny taminao hoe raha mino ianao, dia hahita ny voninahitr’Andriamanitra?”+ 41 Dia nesorin’izy ireo ilay vato. Nitraka nijery ny lanitra+ i Jesosy avy eo, ka hoy izy: “Misaotra anao aho, Ray ô, fa efa nihaino ahy ianao. 42 Fantatro fa mihaino ahy foana ianao, nefa noho ireto vahoaka mijoro manodidina ahy ireto no ilazako an’izany, mba hinoany fa ianao no naniraka ahy.”+ 43 Rehefa avy niteny an’izany izy, dia niantso mafy hoe: “Ry Lazarosy, mivoaha!”+ 44 Dia nivoaka ilay lehilahy efa maty, ary mbola nisy fehim-paty ny tongony aman-tanany, sady nifono lamba ny tarehiny. Dia hoy i Jesosy tamin’ny olona: “Vahao izy, dia avelao handeha.” 45 Lasa nino an’i Jesosy+ àry ny ankamaroan’ireo Jiosy tonga tao amin’i Maria sy nahita an’izay nataon’i Jesosy. 46 Ny sasany kosa nankany amin’ny Fariseo ka nitantara an’izay nataon’i Jesosy. 47 Dia novorin’ny lehiben’ny mpisorona sy ny Fariseo ireo anisan’ny Fitsarana Avo Jiosy, ka hoy izy ireo: “Inona no hataontsika, fa be dia be ny famantarana ataon’iny lehilahy iny?+ 48 Raha avelantsika amin’izao izy, dia hino azy daholo ny olona. Dia ho avy ny Romanina ka haka ny tempolintsika* sy ny firenentsika.” 49 Hoy anefa ny iray taminy, dia i Kaiafa+ izay mpisoronabe tamin’izany taona izany: “Tsy mahay na inona na inona mihitsy ianareo! 50 Tsy noeritreretinareo ve fa mahasoa anareo raha olona iray no maty ho an’ny vahoaka, toy izay ny firenena iray manontolo no ho rava?” 51 Tsy ny heviny fotsiny anefa izany nolazainy izany. Fa satria izy no mpisoronabe tamin’izany taona izany, dia naminany izy hoe ho faty ho an’ilay firenena i Jesosy, 52 ary tsy ho an’ilay firenena ihany, fa ho an’ireo zanak’Andriamanitra efa niparitaka koa, amin’izay izy ireo hangonina ka ho tafaray. 53 Nanomboka tamin’izay andro izay àry, dia niray tetika hamono an’i Jesosy ireo. 54 Tsy nisehoseho teo amin’ny Jiosy intsony àry i Jesosy rehefa nandeha. Niala teo kosa izy dia nankany amin’ny faritra akaikin’ny tany efitra, tao amin’ny tanàna atao hoe Efraima.+ Ary nijanona tao niaraka tamin’ny mpianany izy. 55 Efa akaiky ny Paskan’ny+ Jiosy tamin’izay, ka betsaka ny olona avy any ambanivohitra no niakatra ho any Jerosalema talohan’ny Paska, mba hanadio ny tenany araka ny takin’ny Lalàna. 56 Nitady an’i Jesosy izy ireo. Ary tamin’izy ireo mbola nijorojoro tao amin’ny tempoly, dia nifanontany hoe: “Ahoana ny hevitrareo? Tsy ho tonga amin’ny fety mihitsy ve izy?” 57 Efa nanome baiko anefa ny lehiben’ny mpisorona sy ny Fariseo fa izay mahafantatra hoe aiza i Jesosy, dia tokony hiteny, mba hahafahan’izy ireo hisambotra azy.
^ Abt: “tokony ho 15 stadio.” Jereo F.F. B14.
^ Abt: “nanokatra.”
^ Abt: “ny toerantsika.”